Mucaaradka Liibiya oo qabsadey degankii Col. Qadaafi wararkii u dambeeyey (Sawiro) – SBC
Mucaaradka Liibiya oo qabsadey degankii Col. Qadaafi wararkii u dambeeyey (Sawiro)
Xoogaga mucaaradka Liibiya ayaa gudaha u galey xaruntii Col. Muammar Gaddafi ee lagu magacaabo Bab al-Azizya ka dib dagaalo xoogan oo ay la galeen ciidamada daacada u ah Col. Muammar Gaddafi.
Mucaaradka waxay jabiyeen albaabada deegaanka Bab al-Aiziya iyadoo qaar ka mid ah dagaalyahanka mucaaradka ay gudaha u galeen xarunta Col. Qadaafi iyagoo burburiyey astaamo & taalooyin halkaasi ku yiil oo muujinaya awooda hogaamineed ee hogaamiyaha Liibiya ee la la’yahay halka uu ku dambeeyo.
Taliye ka tirsan xoogaga mucaaradka ayaa shaaca ka qaaday in ay 90% ay gacanta ku hayaan xarunta Col. Qadaafi inkastoo rasaas goos goos ah la maqlayo.
Bililiqo ayaa laga soo sheegayaa inay ka dhacdey gudaha xaruntii Col. Qadaafi iyadoo waxyaabaha la boobay ay ka mid yihiin taalooyin dahab ka sameysan oo wajiga Qadaafi loo ekeysiiyey oo halkaasi yiil.
Saraakiisha xoogaga mucaaradka waxay sheegeen in bililiqada aanay geysan maleeshiyaadkoodu waxaase uu sheegay in dad shacab ah ay geysteen boobkaasi.
Ciidamada daacada u ah Col. Qadaafi ayaa waxay wali wadaan dagaalo iska caabin ah waxaana iyagoo adeegsanaya rasaas aad u culus & madaafiic sida hoobiyeyaasha ay ka dagaalamayaan agagaaraha xarunta Col. Qadaafi.
Sidoo kale xoogaga daacada u ah Col. Qadaafi waxay madaafiic xoogan ku garaacayaan fagaaraha Cagaaran ee ay mucaaradku u bixiyeen Fagaaraha Shuhadada.
Golaha qaranka KMG oo eedeymo loo jeedinayo
Golaha qaranka KMG ee dalka Liibiya ayaa is eedeyn, cambaareyn & shaki hoose soo kala dhexgaley ka dib markii uu been noqdey warar ay faafiyeen masuuliyiin ka tirsan golahaasi sida qabashadii ay sheegeen in la qabtey laba wiil oo uu dhaley Col. Qadaafi.
“Waxaa jira kala shaki ku dhex jira hogaanka golaha qaranka KMG ah gaar ahaan qabashadii la sheegay in la qabtey Saif Al- Islam wiilka Col. Qadaafi” sidaasi waxaa yiri wariye ka mid ah wariyeyaasha wakaaladaha wararka caalamiga ah oo ku sugan gudaha Liibiya.
Sidoo kale waxaa jira tuhuno ka imaanaya Isbahaysatada taageeraya golaha qaranka KMG taasi oo ah in xitaa Tripoli oo kaliya ay awood u yeelan waayeen inay qabsadaan.
Col. Qadaafi oo mudo 42 sano xukumayey wadanka Liibiya isla markaana isagoo 27 sano jir ah afgambi aan dhiig ku quban ku qabsadey hogaaminta wadankaasi ayaa la la’yahay meel uu jaan & cirib dhigay.
Diyaarad dagaal oo Mareykanka laga soo ridey
Taliska ciidamada Mareykanka ayaa xaqiijiyey in mid ka mid ah diyaaradahooda dagaalka lagu soo ridey gudaha wadanka Liibiya, iyagoo sheegay in gantaal nooca Scud-ka loo yaqaan lagu dhuftey, kaasi oo laga soo ridey magaalada Sirte ee ah halka uu ku dhashay Col. Qadaafi.
Moussa Ibrahim, oo ah afhayeenka dawlada Liibiya ayaa sheegtey in ciidamada Qadaafi ay gacanta ku hayaan 75% awooda magaalada laakiin mucaaradka ayaa sheegay in taageerayaasha Qadaafi ay ka haystaan magaalada 20% caasimada ah.
Agoosto 24, 2011 at 10:53 am
Liibiya waa u dhamaatay